Iinkonzo - Yino International Co., Ltd.
Ubuhle kunye nezinto zokuthambisa
Into yokudlala yabantwana
Iimveliso zokusetyenziswa kwemihla ngemihla
Iimveliso ezithintela ubhubhane
imisebenzi yezandla kunye nezipho
izixhobo zekhompyutha kunye nezixhobo
ezemidlalo kunye nokuzonwabisa
Ukuqokelela ulwazi kunye nokuKhokela kweNtengiso
siqokelele iintlobo ezahlukeneyo zolwazi lomthengisi. Kwaye sinezinto zobungcali abathetha ulwimi olucacileyo lwelizwe lakho banokukukhokela kwimarike.
Abasebenzi bethu bezinto zokuthenga baya kukunika ulwazi oluxabisekileyo ngexesha elifutshane elibandakanya ixabiso le-EXW kumthengisi, i-MOQ, uyilo, ixesha lokuhambisa, ulawulo lomgangatho, ulungiselelo, ukucocwa kwamasiko njl.
Iimveliso ezizodwa, sinokubonelela ngeesampuli ukuze uqinisekise. Kwaye sinika ingqalelo kwiindlela zentengiso kwaye sikunika isampulu entsha.
Umyalelo ohamba kunye
Umthengi wethu oqeqeshiweyo owaziyo kakuhle kwimakethi uya kukukhokela kwintengiso. Ukuthelekisa umgangatho kunye nexabiso, ukhetha ababoneleli ngokulula nangokukhawuleza, kwaye ugcine ixesha lakho elixabisekileyo.
siya kulandela ngokungqongqo isampulu yokuhlola iimpahla.Ukuba uthenga ezinye iimveliso zobungcali ezinje ngomatshini siya kufumana izinto ezizodwa zobuchwephesha kwezi ndawo zokwenza i-QC. Kwaye ndininike ingxelo yokuhlola, kuphela emva kokuqinisekisa kwakho siza kuqala ukwenza inkqubo yokuthumela.
Igumbi 70298, umgangatho we-5, kwimakethi yorhwebo lwamazwe aphesheya i-5, Isixeko saseYiwu, iZhejiang, China.
Iindidi zeSihlangu sobuso
iimveliso kuthintelo bhubhane
Iingcebiso zokubeka imisebenzi yezandla ekhaya
Uyigcina njani imihombiso yegolide?